मन्त्री यादवको अंग्रेजी र पुर्वाग्रही चेत - Nayapul Online
केहि दिन अघि सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा उद्योग मन्त्री तथा नेकपाका एकजना प्रभावशाली नेता मात्रृका यादवले बोलेको अंग्रेजीका कारण यतिबेला उनी चर्चामा छन् । उनको अंगे्रजी भाषणको भिडियो आक्रमक ढंगले सामाजिक सञ्जालहरुमा छाइरहेको छ तर उनी भने तराईका आधीँ हुरी पिडितहरुको घाउमा मलम लगाउन व्यस्त छन् ।
उमेरले ६० कटि सकेका मन्त्री यादवले २०३४ सालबाट राजनितिक सुरु गरेका हुन् । उनको राजनितिक यात्रा त्यसबेला भयो जुन बेला मधेशबाट राजनितिमा आउनेहरुको संख्या न्युन थियो र देशमा एकदलिय शासनको दबदबा । यसैक्रममा, उनी पटक – पटक जेल र चरम यातनाको शिकार पनि बने । २०६४ सालमा सभासद बनेर मन्त्री भए पनि उनले त्यसलाई छोडेर जनताको साथमा गए । पार्टी एकता पछि उनी फेरि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारीसहित अहिले सरकारमा छन् ।
मात्रृका यादवप्रति मुलधारका भनाउदा केहि मिडियाहरु र केहि मान्छेहरु पुर्वाग्राही भइदिदा आज उनलाई सम्बन्धित भन्दा धेरै असम्बन्धित विषयहरु उपर स्पष्टिकरण दिनुपर्ने भएको छ ।
उनको सचिवालय पनि यस विषयमा खास जानकार देखिदैन् र उनका सल्लाहकारहरु पनि ।
पछिल्लो अंग्रेजी प्रकरण अति नै सामान्य थियो । आज पनि रुस र चिन लगायतका ठूला देशका राजनितिज्ञहरु अंग्रेजी बोल्दैन्न । बोले पनि त्यसमा आफ्नो भाषाका केहि शब्दहरु मिसाउछन् । यसलाई “लोकल डाइलेक्टस्” भनिन्छ । साहित्यमा त यो धेरै नै प्रयोग हुन्छ । त्यस बारेमा अझै मुलधारकै मिडियाहरु जानकार छैन्न, कारण, कमजोर चेतना र ओभरकन्फिडेन्स नै हो । अध्ययन भन्दा कुरा काट्ने र विषयवस्तुलाई भाइरल गराउने दरिद्रताले यसमा घर गरेको देखिन्छ । किनकी भाषा खाली बुझ्न र बुझाउनको लागि मात्र हो विज्ञता प्रााप्त गर्न होइन ।
फेरि उनले सम्मेलनमा जसरी लगानीकर्तालाई अव ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे त्यो मुख्य विषय थियो । उनले “आवर माइन्ड सेट इज न्यु” भन्दा राम्रो ताली पनि पाएका थिए । तर मिडिया र केहि पुर्वाग्राहीका लागि उनले प्रयोग गरेको “इधर र तिधर” शब्द नै मुख्य मसला बन्न पुग्यो । उनले यति बोलिदिदा केहि मिडियाहरुले भाइरल हुने सुवर्ण मौका पाए , यहि उनीहरुको मकसद थियो । उनले अलिखित भाषण बोल्ने क्रममा भनेका थिए, “ इन पास्ट, यु गोउ इधर एण्ड तिधर फर वान जव, वट नाउ यु मस्ट नट गो इधर एण्ड तिधर । वन स्टप, वन प्लेस ” । उनको भनाई नेपालमा लगानी गर्न आउने लगानीकर्तालाई आश्वास्त पार्न पर्याप्त छ ।
लगानी सम्मेलनमा उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवले गरेको अंग्रेजी भाषणले हाँसो
लगानी सम्मेलनमा उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवले गरेको अंग्रेजी भाषणले हाँसो | onlinekhabar.com
Gepostet von OnlineKhabar am Montag, 1. April 2019
तर केहि पूर्वाग्रही समूहलाई के थाहा विदेशी लगानीकर्ता नेपालीको अंग्रेजी प्रति जानकार छन् र मन्त्रीको त्यो शब्द लोकल डाइलेक्टस् थियो भनेर ? उनले निक्कै असजिलो गरि बोलिरहेको भान हुन्थ्यो त्यसकारण नेपाली वा मैथिली वा कुनै अर्को भाषामा बोलेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरा ठिक हो । उनलाई सचेत पार्नु र आवश्यक सल्लाह दिनु पनि राम्रो हो । त्यस्तै, यस्तो कार्यक्रममा शब्दको हैन् भाव र मुल कुरो नै प्रमुख हुन्छ । यहाँ व्याकरण र अन्य उपकरण त्यति आवश्यक पर्दैन तर भए राम्रो हो । जसरी विषयवस्तुलाई अस्वभाविक र नकरात्मक रुपमा बुस्ट गरेरै तन्काइएको छ, त्यसले मन्त्री यादवप्रति चरम पुर्वाग्रहता र केहि गर्न अघि सर्नेलाई खुट्टा तानेर भएपनि लडाइदिने परम्परालाई झल्काउछ ।
तराईका बारा र पर्सामाआधीँ, असिना र हुरी प्रभावितको पिडामा मलम लगाउन तराई झरेका मात्रृकालाई न कुनै अमुक मिडियाको आफै लोकप्रियता बटुल्न तयार पारिएको सामग्री सुन्ने फुर्सद छ, न शंवेदनाहिन मानवरुपि व्यक्तिले खाटमा सुतेरले लेखिरहेका टर्रा कमेन्ट को कुनै प्रवाह । यस्तै, विश्व परिवेश, राजनितिक बलिदान र भाषा के का लागि भन्ने कुराको कमजोर ज्ञान भएकोले पनि मात्रृका यादव जस्ता व्यक्तिलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ ।
स्मरण छ, सोही सम्मेलनमा भिआइपि आशन नपाएको भन्दै हेपिएको समाचार बनाउने अनि उनले आफूलाई केहि फरक नपर्ने भन्दा त्यस भित्रको महानतालाई नबुझ्ने हाम्रै सञ्चारमाध्यम हुन् । यस्तै, आफै आयोजक भएर आफै सम्मान किन लिने ? भन्ने उनको सकरात्मक विचारलाई उल्टो ढंगले बुस्ट गर्ने पनि यिनै मिडियाहरु हुन् । तर उनको भनाईको सार बुझ्न कमजोर चेतलाई निक्कै गाह्रो छ र असम्भव पनि ।
मात्रृका यादव लामो राजनितिक जिवनबाट उदाएका नेता हुन् । मधेश मात्र हैन् पहाड र हिमालसहितको पुरै नेपाल बुझेका व्यक्ति हुन् । पछिल्लो समयमा उद्योग क्षेत्रमा उनले सुरु गरेका काम र प्रयास राम्रा छन् तर पर्याप्त भने छैन्न । आज उनै मात्रृका सबैको उचित सल्लाह र सुझाव तथा आवश्यक आलोचनाको पर्खाइमा छन् । यसले मात्र समृद्ध नेपाल र सुखि नेपालीको अभियान पुरा गर्न मद्यत गर्छ पुर्वाग्रही ढंगले मात्र छोटो दिमागले काम गर्दा फेरि नेपाल जहाँको त्यहि नरहला भन्न सकिन्न ।
मात्रृकाले केहि अघि नै भनिसके मन्त्री पद छोडेर पनि सामान्यरुपमा जनताको सेवा गर्न सक्छु भनेर । यदि उनले व्यक्त गरेको विचारको, सारलाई विश्लेषण गर्ने आट गरेमा मात्रृका, मन्त्री पदका लागि मात्र हैन् राष्ट्रलाई नै नेतृत्व दिन सक्ने वा सामान्य जनता भएर पनि बस्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्ति हुन् ।